အလုပ်အပေါ် စိတ်ဝင်စားမှု ကင်းမဲ့ သော ဝန်ထမ်းများ၏ အကျင့် ၁၃ ခု – Gentleman Magazine
လုပ်ငန်းခွင်မှာ ရှိနေပြီး ဖြစ်တဲ့လူတိုင်းဟာ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ ၊ လက်အောက်ငယ်သားများနဲ့ အမြဲ ဆက်ဆံနေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ တချို့သော လူများက ကိုယ့်ကို အလုပ်ကြိုးစားချင်စိတ်ရှိအောင်အားပေး သလို အချို့သူများကတော့ အလုပ်အပေါ်မှာ စိတ်ပျက်အောင် အတင်းချတက်ကြပါတယ်။ အကယ်၍ သင်ဟာ အဆိုးမြင်ဝါဒီ တစ်ယောက် သို့မဟုတ် အဆိုးမြင်သမားရဲ့ စကားတွေနားထောင်မိတယ်ဆိုရင် သင့်အတွက် တက်လမ်းဟာ ပိတ်ဆို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်အလုပ် အပေါ် မကောင်းမြင်တဲ့သူ တွေ ဘယ်ရာထူးကြီးကြီးရောက်နေတက်တာရှိသလဲ ဆိုတာ တွေးကြည့်ရင်သိမှာပါ။ ဒါကြောင့် ဘယ်သူတွေက အဆိုးမြင်တွေလဲ ဆုိုတာ ရယ် ဝေါင်ဝေါင် ရွှေးလို့ရအောင် သူတို့ရဲ့အကျင့် တွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
၁။ မကျေမနပ်ပြောဆိုသည် . complain တက်သည် – အကျင့်ပျက် ဝန်ထမ်းများဟာ အမြဲ တမ်း သူတို့ အလုပ်နဲ့ ပက်သက်ပြီး မကျေမနပ်ဖြစ်တာကို ပြောတက်ပါတယ်။ ဘယ်အရာမှသူတို့အတွက် မကောင်းဘူးလို့ထင်နေတက်ပါတယ်။
၂။ အကြောင်းပြချက်ပေးတယ် – အကျင့်ပျက် ဝန်ထမ်းများဟာ ဘယ်တော့ မှတာဝန်ယူတက်တဲ့စိတ်မရှိပါဘူး။ အမှားလုပ်မိတိုင်း အမှားဝန်ခံတောင်းပံတာထက် အကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုး လျှောက်ပေးပါတယ်။
၃။ စိတ်ဝင်စားမှုမရှိ – အလုပ်အသစ် တွေ တာဝန်အသစ်တွေ ပေးလာရင် လုပ်ဖို့ ကိုင်ဖို့ စိတ်မဝင်စား ဖြစ်နေတက်ပါတယ်။
၄။ အချင်းချင်း မကူညီတက်ပါ – သူတို့ အလုပ်မဟုတ်ရင် ဘာမှ အကူအညီတောင်းလို့မရပါ။ ဘယ်သောအခါမှ စေသနာပါပါ မလုပ်ပေးပါ။
၅။ အတင်းတုတ်ခြင်း – အတင်းတုတ်ခြင်းဟာ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း အနှောင့်အယှက်များ အထင်လွဲမှုများကို ဖန်တီးပေးပါပြီး သာသာယာယာ ရှိနေတဲ့ အလုပ်ခွင် ကို ပျက်ဆီးစေပါတယ်။
၆။ လိမ်သည် – လိမ်ပြောတက်တဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ယောက်ဟာ လုပ်ငန်းခွင်အတွက် အန္တရာယ် အရမ်းကြီးပါတယ်။
၇။ ဆရာကြီး စတိုင်ဖမ်းခြင်း – သူ့လောက်မသိ သူ့လောက်မတက်ဘူး ဟု ထင်ကာ ဘဝင်လေဟပ်နေတက်သည်။
၈။ တစ်ယောက်ထဲ အလုပ်လုပ်သည် – ဘယ်သူနဲ့မှ အလုပ်ပေါင်းမလုပ် ပဲ တစ်ကိုယ်တော် ပွဲကြမ်းနေတက်သည်။ ကုမ္မဏီ အလုပ် အစိုးရအလုပ် မှန်သမျှ အများနှင့် လက်တွဲလုပ်တက်မှ အောင်မြင်နို်င်မည်။
၉ ။ တာဝန်မကျေခြင်း – ခိုင်းထားတာကို ဘယ်တော့မှ အချိန်မှန်ပြီးအောင်မလုပ် ၊ ဖြစ်ကလတ်ဆန်းလုပ်ပြီး ကတိ ပျက်တက်သည်။
၁၀။ ခိုင်းမှလုပ် – ဝန်ထမ်းကောင်းများသည် အလုပ်ကို မရှိရှိတာ ရှာလုပ်တက်ပြီး အကျင့်ပျက်ဝန်ထမ်းများ သည် ခိုင်းတာကို စောင့်သည်။
၁၁။ စူးစမ်းမှုကင်းမဲ့ခြင်း – မကောင်းသော ဝန်ထမ်းများ သည် ဘယ်သောအခါမှ မသိတာကို စူးစမ်း မေးမြန်းခြင်း ၊ သင်ယူချင်စိတ် များကင်းမဲ့တက်ကြသည်။
၁၂။ တိုးတက်ရန်မရှိ – ကိုယ်ဟာကိုယ် တိုးတက်လာအောင် ကြိုးစား လေ့လာ သင်ယူမှုကင်းပြီး ဘဝကို အမြီး မြောက်လိုက် အီးပေါက်လိုက် ဖြတ်သန်းချင်ကြသည်။
၁၃။ စိတ်အာရုံ ပြောင်းလွယ်ခြင်း – ဝန်ထမ်းကောင်းများသည် အလုပ်ကို တစိုက်မတ်မတ် တာဝန်ကျေအောင် အာရုံစိုက် လုပ်ဆောင်တက်ပြီး ညံ့ဖျင်းသော ဝန်ထမ်း သည် အာရုံပြောင်းလွယ်ခြင်း အာရုံများခြင်းများဖြစ်ပြီး အလုပ်လာကာ ပေးထားတဲ့လခ ယူပြီး ကိုယ့်ဖုန်းနှင့်ကိုယ် Game ဆော့လုိုက် online ပေါ်မှာ Chatting လုပ်လိုက်. အလုပ်မှလွဲ၍ ကျန်တာအကုန်လုပ် ကာ အလုပ်ဆင်းချိန်ကို ထိုင်ဆောင့်တက်ကြသည်။
အကျင့်ပျက်ဝန်ထမ်းများ သည် ကုမ္မဏီ အဖွဲ့အစည်းများ အတွက် အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေကာ ကုမ္မဏီ တိုးတက်ရာလမ်းကြောင်းတွင် အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည်။ ထိုဝန်ထမ်းရှိနေခြင်းကြောင့် အခြားသောဝန်ထမ်းများ၏ အလုပ်လုပ်ချင်စိတ်ကိုပါ ထိခိုက်စေနိုင်သည်။ လူအများ စု၍ အလုပ်လုပ်ရသော ကုမ္မဏီလုပ်ငန်းများသည် လှေ နှင့်တူကာ ငါးခုံးမ တစ်ကောင်ကြောင့် တစ်လှေလုံးပုတ်နိုင်သည့်အတွက် ထိုကဲ့သို့ ဝန်ထမ်းများရှိပါက ဂရုတစုိုက် ကိုင်တွယ်သင့်သည်။ မိမိကိုယ်တိုင် ထိုကဲ့သို့ ဖြစ်နေပါက ကိုယ်စိတ်ဝင်စားသော ပျော်မည်ထင်သော အလုပ်သစ်ကို ပြောင်းလဲလုပ်ကိုင်သင့်သည်။ မိမိ၏ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဖြစ်နေပါက သတိထား ဆက်ဆံသင့်သည်။
အလုပျအပျေါ စိတျဝငျစားမှု ကငျးမဲ့ သော ဝနျထမျးမြား၏ အကငျြ့ ၁၃ ခု
လုပျငနျးခှငျမှာ ရှိနပွေီး ဖွဈတဲ့လူတိုငျးဟာ လုပျဖျောကိုငျဖကျမြား ၊ လကျအောကျငယျသားမြားနဲ့ အမွဲ ဆကျဆံနရေမှာဖွဈပါတယျ။ တခြို့သော လူမြားက ကိုယျ့ကို အလုပျကွိုးစားခငျြစိတျရှိအောငျအားပေး သလို အခြို့သူမြားကတော့ အလုပျအပျေါမှာ စိတျပကျြအောငျ အတငျးခတြကျကွပါတယျ။ အကယျ၍ သငျဟာ အဆိုးမွငျဝါဒီ တဈယောကျ သို့မဟုတျ အဆိုးမွငျသမားရဲ့ စကားတှနေားထောငျမိတယျဆိုရငျ သငျ့အတှကျ တကျလမျးဟာ ပိတျဆို့သှားမှာဖွဈပါတယျ။ ကိုယျ့အလုပျ အပျေါ မကောငျးမွငျတဲ့သူ တှေ ဘယျရာထူးကွီးကွီးရောကျနတေကျတာရှိသလဲ ဆိုတာ တှေးကွညျ့ရငျသိမှာပါ။ ဒါကွောငျ့ ဘယျသူတှကေ အဆိုးမွငျတှလေဲ ဆုိုတာ ရယျ ဝေါငျဝေါငျ ရှေးလို့ရအောငျ သူတို့ရဲ့အကငျြ့ တှကေို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
၁။ မကမြေနပျပွောဆိုသညျ . complain တကျသညျ – အကငျြ့ပကျြ ဝနျထမျးမြားဟာ အမွဲ တမျး သူတို့ အလုပျနဲ့ ပကျသကျပွီး မကမြေနပျဖွဈတာကို ပွောတကျပါတယျ။ ဘယျအရာမှသူတို့အတှကျ မကောငျးဘူးလို့ထငျနတေကျပါတယျ။
၂။ အကွောငျးပွခကျြပေးတယျ – အကငျြ့ပကျြ ဝနျထမျးမြားဟာ ဘယျတော့ မှတာဝနျယူတကျတဲ့စိတျမရှိပါဘူး။ အမှားလုပျမိတိုငျး အမှားဝနျခံတောငျးပံတာထကျ အကွောငျးပွခကျြအမြိုးမြိုး လြှောကျပေးပါတယျ။
၃။ စိတျဝငျစားမှုမရှိ – အလုပျအသဈ တှေ တာဝနျအသဈတှေ ပေးလာရငျ လုပျဖို့ ကိုငျဖို့ စိတျမဝငျစား ဖွဈနတေကျပါတယျ။
၄။ အခငျြးခငျြး မကူညီတကျပါ – သူတို့ အလုပျမဟုတျရငျ ဘာမှ အကူအညီတောငျးလို့မရပါ။ ဘယျသောအခါမှ စသေနာပါပါ မလုပျပေးပါ။
၅။ အတငျးတုတျခွငျး – အတငျးတုတျခွငျးဟာ လုပျငနျးခှငျအတှငျး အနှောငျ့အယှကျမြား အထငျလှဲမှုမြားကို ဖနျတီးပေးပါပွီး သာသာယာယာ ရှိနတေဲ့ အလုပျခှငျ ကို ပကျြဆီးစပေါတယျ။
၆။ လိမျသညျ – လိမျပွောတကျတဲ့ လုပျဖျောကိုငျဖကျတဈယောကျဟာ လုပျငနျးခှငျအတှကျ အန်တရာယျ အရမျးကွီးပါတယျ။
၇။ ဆရာကွီး စတိုငျဖမျးခွငျး – သူ့လောကျမသိ သူ့လောကျမတကျဘူး ဟု ထငျကာ ဘဝငျလဟေပျနတေကျသညျ။
၈။ တဈယောကျထဲ အလုပျလုပျသညျ – ဘယျသူနဲ့မှ အလုပျပေါငျးမလုပျ ပဲ တဈကိုယျတျော ပှဲကွမျးနတေကျသညျ။ ကုမ်မဏီ အလုပျ အစိုးရအလုပျ မှနျသမြှ အမြားနှငျ့ လကျတှဲလုပျတကျမှ အောငျမွငျနျိုငျမညျ။
၉ ။ တာဝနျမကခြွေငျး – ခိုငျးထားတာကို ဘယျတော့မှ အခြိနျမှနျပွီးအောငျမလုပျ ၊ ဖွဈကလတျဆနျးလုပျပွီး ကတိ ပကျြတကျသညျ။
၁၀။ ခိုငျးမှလုပျ – ဝနျထမျးကောငျးမြားသညျ အလုပျကို မရှိရှိတာ ရှာလုပျတကျပွီး အကငျြ့ပကျြဝနျထမျးမြား သညျ ခိုငျးတာကို စောငျ့သညျ။
၁၁။ စူးစမျးမှုကငျးမဲ့ခွငျး – မကောငျးသော ဝနျထမျးမြား သညျ ဘယျသောအခါမှ မသိတာကို စူးစမျး မေးမွနျးခွငျး ၊ သငျယူခငျြစိတျ မြားကငျးမဲ့တကျကွသညျ။
၁၂။ တိုးတကျရနျမရှိ – ကိုယျဟာကိုယျ တိုးတကျလာအောငျ ကွိုးစား လလေ့ာ သငျယူမှုကငျးပွီး ဘဝကို အမွီး မွောကျလိုကျ အီးပေါကျလိုကျ ဖွတျသနျးခငျြကွသညျ။
၁၃။ စိတျအာရုံ ပွောငျးလှယျခွငျး – ဝနျထမျးကောငျးမြားသညျ အလုပျကို တစိုကျမတျမတျ တာဝနျကအြေောငျ အာရုံစိုကျ လုပျဆောငျတကျပွီး ညံ့ဖငျြးသော ဝနျထမျး သညျ အာရုံပွောငျးလှယျခွငျး အာရုံမြားခွငျးမြားဖွဈပွီး အလုပျလာကာ ပေးထားတဲ့လခ ယူပွီး ကိုယျ့ဖုနျးနှငျ့ကိုယျ Game ဆော့လုိုကျ online ပျေါမှာ Chatting လုပျလိုကျ. အလုပျမှလှဲ၍ ကနျြတာအကုနျလုပျ ကာ အလုပျဆငျးခြိနျကို ထိုငျဆောငျ့တကျကွသညျ။
အကငျြ့ပကျြဝနျထမျးမြား သညျ ကုမ်မဏီ အဖှဲ့အစညျးမြား အတှကျ အဆိပျအတောကျဖွဈစကော ကုမ်မဏီ တိုးတကျရာလမျးကွောငျးတှငျ အနှောငျ့အယှကျဖွဈစသေညျ။ ထိုဝနျထမျးရှိနခွေငျးကွောငျ့ အခွားသောဝနျထမျးမြား၏ အလုပျလုပျခငျြစိတျကိုပါ ထိခိုကျစနေိုငျသညျ။ လူအမြား စု၍ အလုပျလုပျရသော ကုမ်မဏီလုပျငနျးမြားသညျ လှေ နှငျ့တူကာ ငါးခုံးမ တဈကောငျကွောငျ့ တဈလှလေုံးပုတျနိုငျသညျ့အတှကျ ထိုကဲ့သို့ ဝနျထမျးမြားရှိပါက ဂရုတစုိုကျ ကိုငျတှယျသငျ့သညျ။ မိမိကိုယျတိုငျ ထိုကဲ့သို့ ဖွဈနပေါက ကိုယျစိတျဝငျစားသော ပြျောမညျထငျသော အလုပျသဈကို ပွောငျးလဲလုပျကိုငျသငျ့သညျ။ မိမိ၏ လုပျဖျောကိုငျဖကျဖွဈနပေါက သတိထား ဆကျဆံသငျ့သညျ။
Previous: အတွဲတွေ ညားမညား ခန့်မှန်းပေးမယ့် ပုံသေနည်း
Next: ကိုယ့်ဘဝကို အဆုံးအဖြတ်ပေးမယ့် အဝတ်အစား